ကြုံတောင်ကြုံခဲမို့ပါ။ ဒီသစ်ခွပွဲက စင်္ကာပူမှာ ၂နှစ် ၁ ကြိမ် လုပ်တဲ့သစ်ခွပန်းပြပွဲနဲ့မတူပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသစ်ခွညီလာခံလို့
ခုမှ စင်္ကာပူ အလှည့်ကျပြန်တာပါ။ ဒါကြောင့် ကြုံတောင်ကြုံခဲမို့ သွားသင့်ပါတယ်။အသေးစိတ် သိလိုရင် World Orchid Conference Website မှာ သွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လက်မှတ်ခက ကြားနေ.ကို စင်္ကပူ ၁၅ ဒေါ်လာနဲ.ပိတ်ရက်ကို ၂၀ ပါ။၂၀ ရက်နေ.ထိမို.ဒီအပတ်ပိတ်ရက်တွေမှာသွားနိုင်ကြပါတယ်။ဲနံနက် ၁၀နာရီမှည၉နာရီထိဖွင်.ပါတယ်။ပြပွဲအပြင် garden by the bay ကိုလဲတစ်ခါထဲသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မှဖွင့်မှာဖြစ်ပေမဲ့
ခု အထူး ဖွင့်ပေးခြင်းပါ။မမြင်ဖူးအသွင်ထူးလှတဲ.ရှားစောင်းမျိုးစုံနဲ.
ဒီပုံက အနှစ် ၁၀၀၀ သံလွင်ပင်ပါ။ အနှစ် ၁၀၀၀ ၊ ရှည်လိုက်တဲ့ အသက်နော်။ အထင်တော့မသေး လိုက်လေနဲ့။အရွက်စိမ်းစိမ်း လေးတွေနဲ့ဆိုတော့
နောက် ဘယ်နှစ်နှစ်များ ရှင်သန်ဦး မလဲ တွေးစရာပါ။
ပေးရတဲ.ငွေနဲ.မက﻿အောင်ကိုတန်ပါတယ်။ပန်းပြပွဲမှာပြထားတဲ့ပန်းတွေကလဲ အရောင်စုံ၊အမျိုးပေါင်းစုံလှပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက ကချင်မလေး
နှစ်ယောက်ကိုလဲပြပွဲမှာ တွေ.လိုက်ရ ပါသေးတယ်။အချိန်လဲပေးနိုင် ဝါသနာလဲ ပါတယ်ဆိုရင်တော့သွားသ့င်တဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲပါ။
Posted by Aunty Oo at 01:13 14 comments:
မြန်မာပြည်ကပြန်ခါနီးမှာဘဲ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ နဲ.ကြုံကြိုက်လိုက်ပါတယ်။ကြုံတောင့်ကြုံခဲမို.
ရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း လမ်းမတော်လမ်းမှမော်တင်လမ်းအထိ ကျုံးကြီးလမ်း
စားသောက်၊ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်တန်းကြီးကိုကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမှု ဒုက္ခ
ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲကျပ်တည်းနေပါစေ ကထိန်ပဒေသာပင်တွေကိုတော့နေရာတိုင်းမှာ
ကိုယ့်ဗိုက်ကိုယ် စိတ်မချတာရယ်၊ဆီ ကိုကြောက်တာရယ်ကြောင့် သွားရည်ယိုပြီး ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Aunty Oo at 00:389comments:
ဒန်.ဒလွန်ခပ်တုတ်တုတ်လေးတွေ ၄ ချောင်းလောက်ကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး oven toaster (or)gas မီးဖို
ကြက်သွန်ဖြူနီနှင့်ဂျင်းတို.ကို နနွင်းအနည်းငယ်ထည့်၍ဆီသတ်ပါ။ဟင်းခတ်လေးထဲ့ပြီးလျှင် ဘူးသီး
ထားတာထဲ့၊အပေါ့အငံ မြည်းပြီး ဘူးသီးနူးလျှင်စားလို.ရပါပြီ။ စင်္ကပူက ဒန်.ဒလွန်သီးတွေ
Posted by Aunty Oo at 22:36 8 comments:
လိုက်ပါတယ်။၁၀၀ ဂရမ် ကို ၁ ဒေါ်လာခွဲနဲ.၃၀၀ ဂရမ်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ဈေးထဲက ပဲပင်ပေါက်
ရောင်းတဲ.ဆိုင်တွေမှာရောင်းပါတယ်။မတွေ.ရင် ပိုပြန်.ဆိုပြီးမေးကြည့်ရင်ရပါတယ်။၃၀၀ ဂရမ်ကို
စိတ်ထင်အရွက် ၃၀ ကျော်ရမယ်ထင်တယ်။ခွဲခွဲစားတော့သေချာမမှတ်မိဘူး။ဂျွတ်ဂျွတ်အိတ်လေး
နဲ.ထုတ်ပြီးအောက်ခန်းထဲမှာထားရင် ၂-၃ ပတ်ခံပါတယ်။စားချင်သလောက်လေးကြိုထုတ်ထား
Posted by Aunty Oo at 20:54 10 comments:
water bamboo ကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပြီး ရေမျှစ်လို.ခေါ်တာလားမသိဘူးနော်။ရန်ကုန်မှာ
လေးတွေရတဲ.ထိပါ။၂ -၃ ခုလောက်ခွာလိုက်ရင်ရပါပြီ။
ပြီးရင်ပါးပါးလှီး သေးသေးအချောင်းလေးတွေပြန်လှီးပြီး မျှစ်ကြော်သလိုလေးကြော်စားနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ပါးပါးအပြားလေးအတိုင်းဘဲ ကြော်စားလဲကောင်းတာပါဘဲ။သူ.အရသာကိုကနုပြီးချိုတယ်။
ပိုကောင်းမယ်ထင်တာကိုး ကြီးလာမှ ရင်.လို.ဖြစ်မှန်းသိရတယ်။မဟုတ်ခဲ့ရင်လဲရှင်းပြပေးပါနော်။
ရေမျှစ်က နုပေမဲ့ကြော်တဲ့အခါ တခြားအရွက်တွေလို(ဥပမာ ဟင်းနုနွယ်)သိတ်လျော့မသွားဘူး။
Posted by Aunty Oo at 11:477comments:
Labels: -, မီးဖိုချောင်
ဂျင်း ဆိုလို.ဂျင်းဘောင်းဘီလို.တော့မထင်လိုက်ပါနဲ.နော်။ဟင်းထဲ ထဲ့ချက်တဲ့ ဂျင်းမှ ဂျင်း စစ်စစ်ပါ။
ပါတယ်။ဂျင်းက၂မျိုးကြီးများတောင်young ginger လို.ခေါ်တဲ့အပင်ရိုးတံငုတ်တိုလေးနဲ.ဟာရယ်
old gingerလို.ခေါ်တဲ့ဟင်းတွေထဲထဲ့တဲ့ ဂျင်းအိုကြီးရယ်။တကယ်တော့တစ်မျိုးထဲပါ။
Posted by Aunty Oo at 00:04 8 comments:
Posted by Aunty Oo at 01:38 8 comments:
နောက်မှာစားအားရှိရင် လုပ်ချင်တယ်။ဘာလုပ်လုပ်ပိုနေတော့ လုပ်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်နေတယ်လေ။
ကြက်ရင်ပုံတစ်ခု ၃၀၀ ဂရမ်
ခေါက်ဆွဲ ၁ ကေဂျီ
Posted by Aunty Oo at 23:03 12 comments:
Posted by Aunty Oo at 23:359comments:
၁ ကျပ်သား =၁၆ ဂရမ်
၁၀ ကျပ်သား =၁၆၀ ဂရမ်
၁ ပိဿာ =၁၆၀၀ ဂရမ်
၁ ကီလိုဂရမ် =၆၂.၈၅ ကျပ်သား
Posted by Aunty Oo at 23:586comments:
သောကြာနေ.က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းသွားကပ်ပြီးအပြန်မှာ ဆရာတော်ကခြံထွက်ဒန်.ဒလွန်သီး
များပေးလိုက်ပါတယ်။ အရွက်များလဲခူးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်မို.ဝမ်းသာစွာ
စုချည်၊ဂျိတ်လေးမှာဇောက်ထိုးဆွဲပြီး ရေစစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ရေခြောက်တော့မှအရွက်လေး
တွေကိုချွေပြီးဘူးလေးနဲ.ထဲ့ထားရင် အနဲဆုံး၁၀ရက်ကျော်မကခံတယ်။ ရေမခြောက်ရင်တော့ရိပြီးပုတ်
Posted by Aunty Oo at 00:20 8 comments:
Posted by Aunty Oo at 00:059comments:
chicken stock cubes လေးတွေကိုဟင်းရည်ြပုတ်ရင်အကူအနေနဲ.သုံးသလိုmaggi ikan bilis stock
ဟင်းခတ်ကအဓိကဟင်းတခွက်ချက်စာလောက်ရှိတော့လွယ်ကူပြီးစားကောင်းတဲ့ maggi တုံးနဲ.ဘဲ
အဆင်ပြေတာလေးကိုမျှဝေတာပါ။ maggi ကအတုံးရှိသလိုပုလင်းနဲ.အမှုန်.လဲရှိပါတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တာသုံးပေါ့.။တခုပြောချင်ပါသေးတယ် maggi ဝယ်ရင်ပုံမှာပါတဲ့less saltမဝယ်ဘဲ
Posted by Aunty Oo at 23:327comments:
ကြက်သားကင်လေးလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။shan တံဆိပ်tandoori chicken bbq မဆလာမှုန်.ကိုအသုံးပြု
Posted by Aunty Oo at 13:406comments:
Posted by Aunty Oo at 20:27 8 comments:
တစ်ကဒ်ထပ်ဝယ်မှကိုယ့်အမှားကိုသိရတော့တယ်။normal quality အစား good quality ကိုမှားနှိပ်မိ
မသိသူတွေအတွက်ဘလော့လ်ပေါ်ကနေလက်တို.လိုက်တာပါ။ (ကော်မရှင် တစ်ပြားမှမရတဲ့
Posted by Aunty Oo at 01:123comments:
Posted by Aunty Oo at 02:043comments: